တေလာဆွိစ်အလား ထင်မှတ်မှားခဲ့ရတဲ့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးရဲ. ဖျော်ဖြေမှု ရေပန်းစားနေ | Buzzy
တေလာဆွိစ်အလား ထင်မှတ်မှားခဲ့ရတဲ့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးရဲ. ဖျော်ဖြေမှု ရေပန်းစားနေ
ဖိလိစ်ပိုင်နိုင်ငံက ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ တေလာဆွိစ်ရဲ. စတိုင်အတိုင်း ဖျော်ဖြေမှု ပြုလုပ်ပြခဲ့တဲ့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှ ကလေးငယ်ဟာ ပြိုင်ပွဲက ဒိုင်တွေကိုသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဖိလိဈပိုငျနိုငျငံက ပွိုငျပှဲတဈခုမှာ တလောဆှိဈရဲ. စတိုငျအတိုငျး ဖြျောဖွမှေု ပွုလုပျပွခဲ့တဲ့ အသကျ ၇ နှဈအရှယျ ဗွိတိသြှ ကလေးငယျဟာ ပွိုငျပှဲက ဒိုငျတှကေိုသာမက တဈကမ်ဘာလုံးက လူတှကေို ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
သူမကတော့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် Xia Vigor ဖြစ်ပြီး သူမက တေလာဆွိစ်ရဲ. ၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာမည်ကျော် သီချင်း You Belong With Me နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ ...သူမဟာ အဖြူရောင်ဝတ်စုံကို အစပိုင်းမှာ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ၊ တေလာဆွိစ်ရဲ. ဟန်ပန်အတိုင်း ဖျော်ဖြေမှု လုပ်ခဲ့တာပါ ၊ ပုံတွှော ကြည့်လိုက်ပါဦး
သူမကတော့ အသကျ ၇ နှဈအရှယျ Xia Vigor ဖွဈပွီး သူမက တလောဆှိဈရဲ. ၂၀၀၈ ခုနှဈက နာမညျကြျော သီခငျြး You Belong With Me နဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့တာပါ။ ...သူမဟာ အဖွူရောငျဝတျစုံကို အစပိုငျးမှာ ဝတျဆငျထားပွီး ၊ တလောဆှိဈရဲ. ဟနျပနျအတိုငျး ဖြျောဖွမှေု လုပျခဲ့တာပါ ၊ ပုံတှော ကွညျ့လိုကျပါဦး